सेक्समा चरमसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने १० सूत्र - Everest Dainik - News from Nepal
यौन मानवीय जीवनको अनिवार्य आवश्यकता हो । यौन जीवन जति आनन्ददायी हुन सक्यो मानिसको वैवाहिक जीवन पनि उत्तिकै सुखमय हुन्छ ।
तसर्थ, यौन सम्बन्धमा संलग्न हुने महिलापुरुष दुवैले यसबाट चरम सन्तुष्टि लिनका लागि केही कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । यौन समझदारीको विषय पनि हो । उक्त समयमा एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न सके दुवैले आनन्दानुभूति गर्न सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस शीघ्र स्खलन कसरी रोक्ने ?
याे पनि पढ्नुस सेक्सका लागि महिलालाई कसरी फकाउने ? यस्तो छ तरिका